မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားပီလီနှင့် ရော်နယ်လ်ဒို တို့လာမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားပီလီနှင့် ရော်နယ်လ်ဒို တို့လာမည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားပီလီနှင့် ရော်နယ်လ်ဒို တို့လာမည်
Posted by အာဂ on Mar 13, 2012 in Myanma News, News |9comments
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘရာဇီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ အများအပြားလာရောက်ရန် အစီအစဉ်ရှိပြီး ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား ပီလီနှင့် ရော်နယ်လ်ဒိုတို့လည်း လာရောက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ၁၀-၃-၂၀၁၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘရာဇီးသံအမတ်ကြီးက ပြည်မြန်မာဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့()တွင် ၁၀-၃-၂၀၁၂ ရက်ကကျင်းပသည့် ညစာစားပွဲတစ်ရပ်၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီးသံအမတ်ကြီး()က မြန်မာနိုင်ငံ၌ သံရုံးဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဘရာဇီးနိုင်ငံသား ၁၅ ဦးခန့် ခေတ္တလာရောက်နေထိုင်၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း၊ အများစုမှာ ဘောလုံးနည်းပြများနှင့် ဘောလုံးသမားများဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဘရာဇီးတို့ကဲ့သို့ ဘောလုံးအားကစားကို အထူးစိတ်ဝင်စားသည်ကို သိရှိရကြောင်း၊ ကမ္ဘာလောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏အားကစားသံတမန်တစ်ဦးဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုသုံးကြိမ်တိုင်ရရှိခဲ့သည် ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်း ပီလီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုကို ၁၉၉၆၊၁၉၉၇ နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တို့တွင် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ဟောင်း ရော်နယ်လ်ဒိုသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်းစီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဘရာဇီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ အများအပြာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် )( ကဲ့သို လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများလည်း ပါဝင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားဆက်စပ်သတင်းများအရ ၁၉၉၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့ဖလားဆုကို ရရှိခဲ့ကြသည့် ရော်နယ်လ်ဒို၊ ရော်ဘတ်တိုကားလို့စ်၊ ရီဗက်ဒို စသည့် နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားများပါဝင်သည့်အသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းကစားရန်အတွက် ဧပြီိလအတွင်း လာရောက်နိုင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို ခေတ္တရောက်ရှိခဲ့သည့် ဘရာဇီးနိုင်ငံသား ဆေးပညာရှင်တစ်ဦးကလည်း ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းငန်းကို အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြကြောင်းနှင့် ယခုနှစ် ဇူလိုင်လခန့်တွင် လာရောက်ကြဖွယ်ရှိကြောင်း၁၀-၃-၂၀၁၂ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်ကို သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီးသံရုံးကို ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုသံအမတ်ကြီးသည် ၃-၁၁- ၂၀၁၀ရက်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ်. ၁၃ မတ်လ ၂၀၁၂
သြော် .. သူတို့နှစ်ယောက် လာမယ်တဲ့လား … ။
ကြားတယ် .. ကြားတယ် …. ဒီက ဘောလုံးအသင်းတွေဆီမှာ .. တပည့်လာခံပြီး … လေ့လာသင်ယူစရာတွေ .. သင်ယူမလို့တဲ့
အလည်ပဲလာကျပါ မကစားကျပါနဲ့တော်ကြာ ကစားနေတုန်း ဒါဏ်ရာရလို့ပစ်ကပ်နဲ့ ဆေးရုံးပို့ ရလို့ကမ်ဘာမှာ မရှိတဲ့အရှက်ကွဲနေပါမယ့် 
မှန်တာပြောရရင် ဘက်ဂီယိုကြီးလာမှာလောက်တော့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။:D:D
Baggio stands for us..
Pele is selfish and pride though
Ronaldo is hnuu bar
Dun like them however welcome
Yo… man but pls don’t compare to baggio
လက်ပကျွတ်လေး သေသွားကြောင်း သက်သေပဲ။
(နို့မဟုတ်ရင် လော်ဂရစ်သမ်ကြီး ကျကွဲတယ် ထင်နေတာ။)
သူတို့လို ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြန်မာပြည်ကို လာဖို့ စိတ်ပါဝင်စားလာတာကိုက ၀မ်းသာစရာပဲ။
chel gyi says:
MNL က Player တွေအတွက် အတုယူစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်…happy ပေါ့…….
we R one says:
မိန်းကလေးတွေသတိ ဒီကောင်တွေကမလွယ် အထင်သိပ်မကြီးကြနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို
kai on အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News April 2019 ဧပွီ ၂၀၁၉
Shar Thet Man on နိုင်ငံခြားမှာ ပတ်စ်ပိုစ့် ပျောက်သွားခဲ့ရင်.
Shar Thet Man on ရန်ကင်းဗဟိုမန်းဒပ်
Shar Thet Man on ကားငှားတော့မည်ဆိုလျှင်
ကို ထွဋ် on ကျွန်တော်သိသော ကိုဝိုင်း…
ကို ထွဋ် on သင်ကောင်းလျှင် ရာမ မဆိုးပါ…
kai on ကားငှားတော့မည်ဆိုလျှင်
kai on Psychopath နဲ့Sociopath
kai on နိုင်ငံခြားမှာ ပတ်စ်ပိုစ့် ပျောက်သွားခဲ့ရင်.
kai on Payment Gateway in Myanmar Game Industry Overview (1)
kai on ရန်ကင်းဗဟိုမန်းဒပ်
kai on ပြင်ဆင်ထားစေခလို။ Please be READY.
Swal Taw Ywet on အမေပိုင်တဲ့မဏ္ဍိုင်ဆိုတာ
aye.kk on ရန်ကင်းဗဟိုမန်းဒပ်
ဇီဇီ on Psychopath နဲ့Sociopath
Shar Thet Man (74240 Kyats )
monmon (61903 Kyats )